Iindaba -Ukukhusela ngokusetyenziswa kweepaneli zodonga lwangaphandle
Xa uphatha iipaneli zodonga lwangaphandle kunye nokulayisha kunye nokothula iipaneli zodonga lwangaphandle, ulwalathiso lobude beepaneli kufuneka lusetyenziswe njengecala loxinzelelo, kwaye iipaneli kufuneka ziphathwe ngononophelo ukuthintela ukungqubana kunye nokonakala kweepaneli;
Xa uphatha iphepha elinye, iphepha kufuneka lihanjiswe nkqo ukunqanda ukusilela kwiphepha.
Umphezulu osezantsi weendlela zothutho kufuneka ucaba, kwaye iipaneli zodonga zangaphandle kufuneka zilungiswe emva kokulayishwa okuthe tyaba ukunqanda ukonakala kwemveliso ngenxa yokubopha okugqithisileyo kweepaneli zodonga lwangaphandle ngexesha lokulungisa;
Ukunciphisa ukungcangcazela ngexesha lokuhamba ukunqanda ukudibana kunye nemvula.
Indawo esingqongileyo yokubeka iipaneli zodonga lwangaphandle kufuneka zingenise umoya kwaye zomile, kwaye isiza kufuneka sibe tyaba kwaye siqine;
Xa usebenzisa izikhuseli zeenkuni zesikwere, qinisekisa ukuba imveliso ayinakukhubazeka;
Xa zibekwe emoyeni ovulekileyo, iiphaneli zodonga ezingaphandle kufuneka zigqunywe ngelaphu elingangeni manzi;
Xa ugcina iipaneli zodonga lwangaphandle, kufuneka zigcinwe kude kubushushu obuphezulu kunye neendawo zokufuma eziphezulu, kwaye akufuneki zixutywe nezinto ezonakalisayo ezinje ngeoyile kunye neekhemikhali.
Xa uvula iphakheji yodonga lwangaphandle, kuya kufuneka uyibeke iflethi kuqala, emva koko uyikhuphe ngaphezulu kwephakheji yemveliso, kwaye ukhuphe ibhodi ukusuka phezulu kuye ezantsi;
Sukuyivula ipaneli yodonga lwangaphandle ukusuka kwicala ukunqanda ukukrala kwipaneli.
Emva kokuba ipaneli yodonga lwangaphandle lisikiwe, ukufakwa kwentsimbi yokusika kuya kudityaniswa kumphezulu kunye nokusikwa kwepaneli, ekulula ukurusa. Ukufakwa kweentsimbi okuseleyo kufuneka kususwe.
Ngexesha lokwakha, ingqalelo kufuneka ihlawulwe ukukhusela umphezulu webhodi yangaphandle yodonga ukuthintela ukukrwela kunye neempembelelo.
Wuphephe umsebenzi wokwakha xa kuna imvula;
Ngexesha lenkqubo yokwakha, thintela ingaphakathi leepaneli zodonga lwangaphandle ekunxibelelaneni namanzi ukuthintela amanzi angaphakathi ukuba angangeni ukusuka kumphezulu, kubangele umhlwa kunye nomhlwa kumphezulu wepaneli, ukunciphisa ubomi benkonzo.
Kunqande ukuyisebenzisa kubushushu obuphezulu, ukufuma okuphezulu, kunye neendawo zokukhupha iasidi (ezinje ngamagumbi okubilisa amanzi, amagumbi okutsha, imithombo eshushu, iindawo zokugaya iphepha, njl.
Ukuhamba komgaqo kuphuma eludongeni, imibhobho yodonga yokulungisa umoya kunye nemibhobho ye-condensate, imilinganiselo ehambelana nayo kufuneka igcinwe ngaphambi kofakelo lweplate. Musa ukuvula imingxunya emva kofakelo lweplate.
Ukuba kukho amalungu axhasayo ama-air conditioners, ukukhupha umoya kunye nezinye izibonelelo kumphezulu wodonga, i-welding yombane kunye nezinye iinkqubo kufuneka zenziwe ngaphambi kokuba kubekwe iipaneli zodonga kunye nezinto zokwambathisa.